Steam Tamba: iyo nyowani yekuvandudza iri kunze neProton 4.11-2 | Linux Vakapindwa muropa
Valve yaita zvinhu zvikuru zvemitambo yenyika yeLinux, uye humbowo hweiyi ndiyo yayo Steam Play mutengi kuitira kuti mitambo yese neyakagoverwa yeGNU / Linux igone kunakidzwa nekodhiyo yemitambo yevhidhiyo yeiyo Steam chitoro. Asi kunze kwaizvozvo, zvirokwazvo uchatoziva kare chirongwa cheproton tataura zvakawanda nezvazvo muLxA. Iyo yakavakirwa paWini kuunza huwandu hukuru hweanowanikwa maWindows mazita kuLinux yedu.
Zvakanaka, zvishoma nezvishoma ivo vari kuvhura vhezheni nyowani yemutengi wavo weLinux uye ikozvino vatova neshanduro yavo nyowani inosanganisira Proton vhezheni 4.11-2. Zvinotaridza kuti Valve pamwechete neCodeWeavers (iyo kambani inogadzira CrossOver yakavakirwa paWine), yagadzirisa mamwe matambudziko mune ino diki dudziro yeProton.
Kune rimwe divi, kuva neiyi nyowani vhezheni Proton 4.11-2 inosanganisira shanduko senge:
Protonisi 4.11-2: ndiyo yechipiri diki yekuvandudza yeProton 4.11, iri zita rakapihwa kunatsurudzwa kwakaitwa Valve neWine 4.11, uye nekudaro inosanganisira zvese zvakagadziridzwa zviripo mune iyi vhezheni yeWine inoenderana.
DXVK kugadzirisa kune v1.3.2: Izvi zvinoreva shanduko huru, kunyanya mukuita. Rangarira kuti DXVK ndechimwe chirongwa chinonakidza chatakatotaura nezvacho mublog rino uye kuti rinogona kuturikira DirectX API mirairo kuVulkan.
FAudio kugadzirisa kune v19.08: chirongwa cheodhiyo, kudzoreredzwa kweXAudio. Nenzira iyi, kune mamwe maraibhurari eiyo DirectX Audio nguva yekumhanya kuitira kuti mitambo inoishandisa ishande mushe muLinux. Inosanganisira XAudio2, X3DAudio, XAPO, uye XACT3.
Waini-mono kugadzirisa kune v4.9.2- yakavhurwa sosi, yekuyambuka-chikuva kuitiswa kweMicrosoft .NET Sisitimu inodawo kune iyi yemuno Windows mitambo.
Kuvandudza kwekuratidzira ne yepamusoro furemu.
Vamwe gadziriso iyo yakaomesa mimwe mitambo yemavhidhiyo sePasi Dziviriro Yemauto 5, Earth Dziviriro Force 4.1, etc.
Kana iwe uchida download Steam Tamba, iwe unoziva kuti unogona kuitora kubva iyo yepamutemo Steam webhusaiti ndatonakidzwa nekutamba ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Tamba: iyo nyowani yekuvandudza iri kunze neProton 4.11-2